सदस्यता जंबो योजना - Rikoooo
एक बनेर जंबो सदस्यले तपाईंलाई रामको समर्थन गर्नेछ र निम्न फाइदाहरूको आनन्द लिनेछ
4000 / s =4प्रति GB मिनेट अधिकतम डाउनलोड गति!
12 एक साथ / समानांतर डाउनलोड वा 12 कनेक्शन प्रति आईपी ठेगाना = (4000 KB / SX 12)
साइटमा कुनैपनि विज्ञापन छैन, सफा र सहज नेभिगेसन
Rikoooo द्वारा सिर्जना केही Add-on र उपहार पहुँच
नीलो 'डाउनलोड' बटन प्रत्यक्ष डाउनलोड
जम्बो १२ महिना
लामो समयको लागि मनको शान्ति
1 वर्षको लागि
12 महिनामा3निःशुल्क महिनाहरूमा कम मूल्यहरूमा जम्बो सदस्यता
सबै डाउनलोडहरू तपाईंको हुन्
3 महिनाको लागि
3 महिनाको लागि मेरो डाउनलोड गति अनलक
पैसा को लागि सबै भन्दा राम्रो मूल्य
6 महिनाको लागि
कम मूल्यमा उच्च गति डाउनलोडको साथ6महिना
जम्बो किन प्रस्ताव छ? हजारौं प्रयोगकर्ताहरूमा डाउनलोड पठाउँदै महत्त्वपूर्ण खर्चहरू समावेश गर्दछ। ती लागतहरू विज्ञापनको साथ मात्र कवर गर्न सकिँदैन। यद्यपि, जम्बो प्लानमा तपाईं राम्ररी Rikoooo.com अनलाइन कोयम राख्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। सदस्यता साँचो रूपमा वैकल्पिक छ, तपाईं अझै पनि सीमित फाइलमा सबै फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
* तपाईको इन्टरनेट जडान र समयको आधारमा गति डाउनलोड भिन्न हुन्छ
टूलटिप सामग्री लोड गर्न असमर्थ।